Kedu ihe njikwa kacha mma maka igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Okporo ụzọ ịnyịnya ígwè - olee otu anyị si edozi
Okporo ụzọ ịnyịnya ígwè - olee otu anyị si edozi
Kedu ihe njikwa kacha mma maka igwe kwụ otu ebe?
Nakacha mmacarbonakamakaokporo ụzọ anyịnya igwe
3T Superergo Team Stealth CarbonAka.
Prime Primavera X-Ìhè CarbonAka.
Enve kọmpat CarbonAka.
Zipp SL-70 Aero CarbonAka.
Nna m ochie Superleggera CarbonAka.
Cinelli Neos CarbonAka.
Bontrager Pro Isocore VR-CF CarbonAka.
(Swoosh) - Taa na Abu Dhabi Tour anyị ga-agwa ndị na-agba ịnyịnya banyere nhọrọ nke aka, n'ihi na enwere nhọrọ buru ibu, n'ihe gbasara Aero ma ọ bụ Standard, kamakwa obosara na n'ezie ọdịdị nke tụlee. (Gentle Music) - Na Caleb Ewan ugbu a, onye nọ n’ọkwa dị oke egwu dịka ị maara ma ụfọdụ ọmarịcha aka na ebe a. Went gara maka ọdịda ọdịnala na naanị 16 sentimita asatọ na njedebe m chere - Ee, ọ dị mma, achọrọ m ka m mee mkpọchi ndị a karịsịa maka m n'ihi na nke a bụ ụlọ mmanya nkịtị ebe a, echere m na ọ dị ka ụdị ọdịda ọhụrụ, mana Ọ dị m ka enweghị m ike ịgbapụ na ya, yabụ, m họọrọ ọdịda ọdịnala, yabụ, ee, ha mere mmanya a n'ụzọ a maka mụ na ee, ọ dị ezigbo warara, mana mgbe ahụ, mgbatị ahụ dị oke ogologo, ee ọ bụ bit, Echere m na ọ bụ ihe gabigara ókè ọnọdụ, ma ee, m na-ahọrọ Sprint m na-eche m elu ahu bụ nnọọ ogologo tụnyere ụkwụ m, na ihe mere m na-agba ọsọ ndị dị otú ahụ a obere etiti, ma mgbe ahụ, m nso bụ nnọọ ogologo.
Yabụ na echere m na ọ na - enyere m aka ịbanye n'ọnọdụ ahụ - na n'ikpeazụ ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya ka na-eji ọdịda ọdịnala, ọ bụghị na ọtụtụ ndị ọha na eze ka ị chere? - N'ikwu eziokwu, naanị m na-ahọrọ mmetụta ahụ mgbe ị kwụsịrị ebe a ma gbaa ọsọ, ọ dị m ka ị nwere ike ịdọrọ ụlọ mmanya ahụ karịa. Echere m na ọ dị ka mmasị onwe onye. Onye ọ bụla dị iche na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe m masịrị - have nwere ụfọdụ ọmarịcha aka dị oke egwu dịka anyị nwere ike ịtụ anya, gịnị ka ị nwere ebe ahụ? - Echere m na ha bụ 38, ha bụ ndị pere mpe anyị ga-aga maka oke anyị nwere ike iji 36 mee ihe atụ, mana 38 dị mma.
Ma mgbe anyị nwesịrị ọtụtụ nyocha nke ikuku ikuku, anyị chọpụtara na ọ bụghị naanị na ọ dị mma ịdị ala, mana ọ dịkwa oke mma ịnwe warara, yabụ echiche a bụ na m ga-abanye n'ọnọdụ izu ike m ma nwee ike ikuku.- Ma chọpụtaghị na n'oge ụfọdụ, ọ bụrụ na ị bụ gịrịgịrị, na ọ na-eme ka ikpere gị pụọ? - Mba, mgbe m na-anya ụgbọala, m ka na-anya ụgbọala otu ahụ. Know mara na nkwojiaka m dị n'ime Ọ bụghị na m na-anya ụgbọala otu ahụ, yabụ m ka na-abanye.
Ma mba, yabụ na ịmara mgbe ị ga - eme ya n’izu izizi, ọ dị mma, ọ dịkwa obere. Ma na nke ahụ ọ dị mma na mgbe ịlaghachi na 42 ọ dị ka ịnya ụgbọ ala. - Echiche ole ka ị tinyere n'ime nhọrọ ị na-ahọrọ? ? - Ha dị larịị n’elu ma nwee okpu mechie ọnụ, ọ bụ ya.
Ha bụ nnukwu ergos, ọkọlọtọ mara mma. Ihe ekpughere ntakịrị, 42 n'okpuru na 40 n'elu. Yabụ na ọ ga - adịtụrụ gị mfe karịa ka ị ghara iji aka gị kụọ aka na aka ahụ mgbe mgbe ị na - apụ na sadulu, mana ọ bụ naanị ihe ị ga - eme na igwe ịgba ọsọ.
Anyị na-ejikarị ntakịrị n'ihi na enwere m afọ iri anọ na abụọ, mana anyị na-atụle site na hood, mana 42 na hoods, mana 44 na tụlee. Ya mere, n'ezie anyị laghachiri na 40 na 42 nke dị m mma karịa - 38 center center e n'elu na 42 na dobe. Kedu ka ị si bịa họrọ ụlọ mmanya a? - Emeghị m uche m, nke ahụ bụ otú ha si eme ya, ya mere, ọ dị ka nke a, anọwo m afọ iri anọ na abụọ, naanị otu ogwe aka, ọkọlọtọ ọkọlọtọ, na mgbe anyị gbanwere Enve, ha nwere aka a na achọrọ m ịnwale ya, n'ihi na ọ dị larịị na echiche ahụ bụ iji bitas ewepụghị dị ka ụdị ezumike maka ogwe aka m na-agba ịnyịnya dị ka mgbe ị nwere ụlọ okirikiri wee kụọ oghere, ma ọ bụ ị kụrụ, mgbe nwa oge ị na-enwe ihe mgbu na ogwe aka gị, mana ịnwere ike ịnya ya ruo ọtụtụ awa ma ọ bụrụ na ịchọrọ.- you jirila ya nwalee ọtụtụ ihe? Udi nke tụlee? Have nwere ọdịdị kọmpat dịtụ ebe a.
Ndị ọzọ na-agba ịnyịnya, dị ka Caleb Ewan anyị kwurịtara okwu na mbụ, nwere ọdịnala ọdịnala karịa - Ee dịka m kwuru, naanị m nwere otu kpochapụwo tupu mgbe ahụ m nwara ụlọ mmanya a ma jiri obi eziokwu mee ya, na mbụ ọ dị m ka ọ naghị m n'ezie na-amasị ya, m chọrọ ka dobe na-ala. Maka, dịka ị kwuru, nke a siri ike. Ma mgbe ahụ ọ dị ka nguzozi ọzọ ogwe ahụ enweghị mpempe akwụkwọ dị elu n'elu ka m wee nye ya nke ahụ. - Echere m banyere ya, amaghị m, ma eleghị anya, nnukwu onye ahụ nwere ahụ iru ala, mana enweghị m nnukwu ubu ka m wee nwee ike ịnagide aka 40 na ee.
Mgbe ị na-agba Sprint, ọ bụ ihe niile gbasara ikuku na ubu, yana ihe kachasị mma nke ikuku anyị nwere ike inweta ezigbo ngwọta. Ọ dị kọmpụ, gbagọrọ agbagọ, enwere m ihe mejupụtara na mbido wee mezie ya. Ahụrụ m ya nke ọma ma enwere m ike dọpụta ogwe aka m nke ọma.
Ee ee ị nwere ike ime nke ahụ kwa Lee osisi gia na ọnọdụ dị mma iji gbanwee ka ị gbanye ngwa ngwa na sprint, ee echere m na ọnọdụ ahụ, ọnọdụ ala, naanị m na-eji na K nke ikpeazụ, di na nwunye ikpeazụ K, n'ihi na ọ dị ala, mba? N'ihi na achọrọ m ịdị na-eme ikuku na Sprint na enwere m ike ịdị mma, enwere m ike ịnọ na ọkwa. - Ma kedu ka ị mere? Shapedị a na obosara a dị iche na ihe ị ga-eji na velodrome? - Ọ mara mma. Ọ bụ kpam kpam otu, usoro na ihe niile, n'ihi na m na-eji otu ihe na ihe niile.
M na-agbalị iji otu nha na aka na mgbe niile bụ otu ihe na egwu n'ihi na achọrọ m isi n'okporo ụzọ ahụ pụọ na site n'okporo ụzọ ahụ gaa n'okporo ụzọ ahụ ngwa ngwa na enweghị nsogbu ọ bụla. (Horn music) - Anọ m na-anya ụgbọ ala na etiti ebe m bụ nwata, onye na-eti ọkpọ. Ee, achọpụtara m na ọ dabara adaba.
Know mara, ọ dị ya ka ọ zuru oke na ị maara mgbe ị na-eje ije ụfọdụ ndị na-eche ma ọ bụrụ na ị dị warara karịa na ọ bụ ihe aerodynamic, mana mgbe ahụ ịmara mgbe ị dị warara, ị nwere ike ịnya ịnya aka gị karịa, yabụ, achọpụtara m nke a ga-abụrụ m ihe ndozi. - Ma ị nwere ọdịnala, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịda dị ka akụkụ nke ihe? - Anọ m na-anya ụgbọala ndị a afọ ise ugbu a. Naanị ụdị ọdịnala dị nnọọ dee p njikwa.
Echere m na naanị mgbanwe anyị nwere bụ ntọala etinyere n’ime ya, nke m na-enwebeghị. You emebeghị ihe niile-na-otu maka ogwe aka a yabụ echere m na ị na-achọ ime ya n'oge na-adịghị anya, a ga-agbanye ya n'otu - Ọ ga-amasị m ịgwa gị na enwere ezigbo arịrịọ n'akụkụ m Canyon dị maka afọ iri anọ na otu, mana ya na sistemụ njikwa jikọtara ọnụ, nke ị nwere warara dị ka o kwere mee ma nwee ogologo 12 ma ọ bụ 13 cm na ya. Na ọgba tum tum ahụ, nkasi obi dị m mkpa n'ezie.
Na nnukwu ihe m bụ naanị ewepụghị efere ngalaba naanị ebe a. Enweghị m mmasị ịnweta ụdị ọ bụla. Ma nwee okpukpu udiri akuku karia udiri uzo obula di n'ime ya.
Achọtara m mgbe m nwere otu o si ekwu? Dịka ọmụmaatụ, ebe ergonomic karịa. Mgbe m nwere nke ahụ, m nwere ụdị mkpịsị aka nwụrụ anwụ na ihe niile - Would ga - asị na ị na - etinyekwu oge na hoods, ị maara, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na - achọ ịnweta ikuku karịa nke tụlee? - Ee, ee na ọzụzụ m na-anwa ime ngwụsị na mmiri ahụ, mana ọbụlagodi oge elekere ụnyaahụ, achọpụtara m echetaghị m ebe m nọ mana m nwere ike ịkwụsị iche banyere ya mgbe m lekwasịrị anya na-achọ ịga ngwa ngwa bụrụ, mana n'ụzọ ụfọdụ ana m egburu onwe m na tụlee na mkpuchi ma jiri ha abụọ. Ọ bụrụhaala na m miri emi nke ahụ bụ ihe niile dị mkpa - N'afọ a, ọhụụ na-akwado anyị, n'ihi ya, ha na-enye anyị ụlọ mmanya ndị a na-eche na ọ dị mma n'ihi na ha dị ezigbo mma mana ha ka nwere uru nke ikuku nke ọ bụla. ọzọ Handlebars na-enye.
M na-eji narrower handlebars na mbụ na ọrụ m, ma ndị a bụ doro anya dị ka a Nchikota ya mere ha bụ nanị dị na nha oke. Yabụ afọ a, m na-eji 42 cm nkịtị anyị. Tupu m jiri 40 cm mee ihe mgbe m ka na-eji eriri aka aluminom.
Na ee, mana ọ masịrị m, ha dị ezigbo mma - na usoro nke ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya nke nwere ọdịda ọdịnala, ha nwere kọmpat karịa, nke ahụ bụ nhọrọ ị maara nke ị bịara mgbe ị na-emechara? - M na-ejikarị ọdịdị ọdịnala eme ihe ma ha anaghị eme ha na nsụgharị aero ka m wee nwee ndị a ugbu a ma ọ masịrị m, ọ dị mma - Yabụ nhọrọ dị iche iche n'etiti ndị na-agba ọsọ ị chọghị ka a gbaa gị ajụjụ ọnụ. n'ihi na ha enweghị oke nhọrọ na obosara ma dobe n'aka ndị na-akwado ha. Nri, ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye anyị mkpịsị aka aka n'okpuru. Denye aha na GCN Tech site na ịpị ụwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ otú ndị na-agba ịnyịnya si ahọrọ ahịhịa ha, ị nwere ike ịchọta isiokwu ahụ ebe a.
Kedu ihe a na-akpọ njikwa igwe kwụ otu ebe?
Ogwe ndị na-eme mkpọtụ
Ha bụkwaa maara dị kaUgwuOkporo ụzọma ọ bụ Zie eziaka. N'ihi oke mkpocha ya, ụdị ogwe ndị a na-enye onye na-agba ya aka ịchịkwaigwe kwụ otu ebeka ị nọ ọdụ kpamkpam.
roadmụ nwanyị ụzọ igwe
Nwere ike itinye eriri aka mbadamba n'okporo ụzọ?
Thedị mpịachi nke ogwe osisi na-enye oheregịinwe otutu ọnọdụ aka ga-enyere akagịnọrọ nke ọma site na ikwegịiji gbanwee ha n'oge ịnya ịnyịnya. Somefọdụ ọnọdụ ndị ahụ na-arụ ọrụ ikuku, maka ogegịchọrọ ịgba ọsọ ọsọ. Maọ bụka zuru oke ok na-agba ịnyịnya aokporo ụzọnke ahụ nwereflat flat.
Kedu ihe kpatara eji eji igwe kwụ otu ebe?
Ihe kpatara yaigwenweeobere akabụ ejiji. Iri iri ahụ nwere ihe ntụchi ka onye na-agba ya wee belata ihu ya site n'ịdabere n'ihu. Nke a bụ ọnọdụ na-adịghị arụ ọrụ nke ọma ma na-egbu mgbu na njem ogologo.
Ndị na-edozi carbon kwesịrị ya igwe kwụ otu ebe?
Mbelata ibu, ụdị dị iche iche, ọkwa nchekwa, nkasi obi na arụmọrụ bara uru nke acarbonmmanya niile na-adọrọ adọrọ. Agbanyeghị, maka ọtụtụ n'ime anyị ogologo oge, ogo na ọnụ ala nke aluminom ga-agụta maka ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwulite ahụ dịkarịsịrị ala na obereigwe kwụ otu ebeenwere ike ma ghara ịnọ na mmefu ego - gaacarbon.Ọnwa Iri 4, 2016
Kedu njikwa ndị uru ndị a na-eji?
Adam Yates nke Mitchelton-Scott na-eji aakama sitere na Syncros, ika nke Scott nwe ugbu a. Ogwe ahụ bụ Creston 1.5, nke emere site na aluminom na ntakịrị ọkụ nke emere iji mee ka ohere dị mfe na tụlee. Ihe RR1. 5 azuokokoosisi bụ aluminum kwa, na a -6 Celsius n'akuku.Jul 24, 2018
Gịnị bụ isi nke dobe njikwa?
DobeOgwe na-enye gị ohere irikpu ma belata ikpuru. Ọnọdụ a nwere ike ime ka ọsọ na arụmọrụ gị dịkwuo ukwuu. Nke a na-abata uru mgbe ị na-arịda ugwu, na-agbago akụkụ dị larịị ogologo, ma ọ bụ na-agbagharị na ikuku.Abụọ 24, 2020
Gịnị mere ụfọdụ igwe eji eji igwe kwụ otu ebe agba?
Nke ahụ pụtara na ọ na-eji akwara dị iche iche. Ghaghachi azụ n'etiti ọnọdụ 1 na 2 nwere ike izu ike n'ubu gị, olu na azụ na njem dị anya. Ọnọdụ ubu dị n'elu, naanị ebe ogwe osisi na-aga n'ihu. Have nwere ike ịchịkwa karịa karịa ịnọ n'ọnọdụ dị ọcha.Jenụwarị 6, 2020
Enwere m ike ịgbanwe njikwa aka m n'okporo ụzọ m?
- Ee, ha nwere ike ịgbanwe, mana usoro a adịghị mfe. Enwere ọtụtụakaụdị iji kwado ndị na-agba ịnyịnya dị iche iche, leverage naigwe, na dayameta nha ga-adị iche iche maka nke ọ bụla.
Ogwe dobe na-eme gị ngwa ngwa?
Tụleenye ohere aerodynamic- Aerodynamics na-arụ ọrụ dị mkpa na ọsọ gị na iji ike gị mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè. Onyengwa ngwa ịokirikiri, ka aerodynamics na-abata.Dobe Ogwekweregịkpukpuo ma belata ikpuru. Ọnọdụ anwere ikemee ka ọsọ na arụmọrụ gị dịkwuo ukwuu.Abụọ 24, 2020
Kedu ụdị njikwa dị iche iche maka igwe kwụ otu ebe?
Handlebars ukwuu n'ime abụọ ada: dobe Ogwe na ziri ezi. A na-etinye Ogwe dobe na igwe kwụ otu ebe ezubere iji gaa ọsọ ọsọ na / ma ọ bụ ogologo ụzọ. Ha na-enye ohere maka ọtụtụ ọnọdụ aka-na ọnọdụ ikuku na-efe efe. Ewezuga igwe kwụ otu ebe ọtụtụ ugwu, obodo mepere emepe, igwe kwụ otu ebe, wdg.
Kedu ụdị mmanya ị na-etinye n'okporo ụzọ ịnyịnya?
Carver bụ onye na-akwado ogwe osisi ergonomic nke dị ugbu a dị ka ọ dị ugbu a n'okporo ụzọ ọhụrụ. Dabere na ya, usoro nwayọ nwayọ na-enyekwu nhọrọ maka ọnọdụ aka, ma ka na-ebelata nrụgide maka nkasi obi ogologo oge.
Ebee ka itinye Aka Gị n’okporo ụzọ?
Nke a gụnyere ogwe aka, nke bụ etiti ụlọ ọkpa gị ma nwee nkasi obi ma fechaa ka ị na-emezi njikwa gị. Ogwe igwe kwụ otu ebe na-enye ohere maka ọnọdụ ịnya ịnyịnya atọ dị iche iche: You nwere ike itinye aka gị na mmanya ahụ n'onwe ya, na hoods, ma ọ bụ na tụlee.